Myanmar IT Resource Forum » ADMINISTRATION BOARD » » Help and Feedback » သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ
1 သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 23rd February 2011, 12:51 am
member ဦးရေရဲ့ ၁၀၀ ပုံပုံ တစ်ပုံတောင်မှ ပုံမှန်မဝင်ကြတဲ့
admin တွေကအစ active မဖြစ်...mod တွေကအစ ဖိုရမ်ပေါ်မှာ မမြင်ရတာကြာပါပြီ...သတင်းကလည်း နိုဝင်ဘာလကနေ မတက်..
ဖိုရမ်တစ်ခုရဲ့ အသက်ဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးငြင်းခုံတာကအစ tutorial တွေအလယ် ပြန် share တာ တွေအဆုံး မရှိတဲ့နောက်တော့
2 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 23rd February 2011, 2:08 pm
လွယ်လွယ်လေးနဲ့ စခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်
အဲ့တော့ဗျာ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ တော့မပျက်လောက်ပါဘူး
ဟိုမအားဒီမအား မအားခြင်း၉၆ပါး(မှားကုန်ပြီ )
(ပြန်ပြောခြင်းမပြောခြင်းဟာ ပြန်ပြောသင့်တဲ့လူတွေရဲ့ အလုပ်ပါ
ပြန်မပြောရင်တော့ ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ လူမရှိလို့ဟု မေးသူဘက်ကယူဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်)
ကိုfoxအနေနဲ့ရေးစရာရှိတာ ကိုလည်းရေးပါ
3 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 23rd February 2011, 2:59 pm
ကျွန်တော်က Seminar နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို တင်ပေးနေကြပါ။ ခုတစ်လော seminar တွေသိပ်မလုပ်တော့ ကျွန်တော်လည်းမတင်ရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ Programming နဲ့ ပတ်သက်တာတွေလည်း သိသလောက် ပြန်မျှပေးပါတယ်။ အခြားသတင်းဆိုတာကလဲ သတင်းထောက်မဟုတ်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ Journal တွေကနေပဲ အမြဲယူနေလို့ လဲမဖြစ်ဘူးလို့ထင်လို့ ပါ။ ဒါပေမယ့်..ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲလေ့လာနေဆဲဆိုတော့ သိပ်မတင်နိုင်တာပါ။
ပြီးတော့ member login ၀င်တာက connection ပေါ်မှာလည်း နဲနဲမူတည်နေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီလိုဖိုရမ်တွေကလဲ ဖောင်းပွနေတော့ member တွေကလဲ ဖောင်းပွပြီး Sign up သာ လုပ်နိုင်၊ ပုံမှန် login မ၀င်နိုင်ကြတာလဲပါပါတယ်။ reply ကလည်း ကျွန်တော်ပြန်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာဆိုပြန်ပေးပါတယ်။
ခုလို သတိပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ r
4 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 6th March 2011, 9:53 pm
ဒီ Topic လေးမြုပ်နေတယ်...
5 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 12th March 2011, 1:29 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-01-13
လှုပ်ရှာလာရင် သက်ဝင်လာမှာပါပဲ မအားကျလဲအားတဲ့အချိန်ဝင်လာကြပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား
6 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 3rd April 2011, 8:50 pm
နှိုးဆော်တဲ့ post လေးတောင် ဝင်ဆွေးနွေးတဲ့လူ အရေအတွက်က အားရစရာပါ့လားကွယ်
7 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 4th April 2011, 12:00 am
အားလုံးက၀ိုင်းဝန်ပြုလုပ်ရမှာပါပဲ မေးတဲ့သူကမေး ဖြေမယ်သူကဖြေပေါ့ ဒါဆိုသက်ဝင်လာမှာပါပဲ Admin များကလဲ သက်နိုင်သလောက် နေတိုင်းမဟုတ်တောင် ၀င်ရောက်ပေးပြီးဖြေဆိုပေးကြပါ ပြောတာပြောတာကျနော်ကလဲသိပ်မသိတော့မဖြေတတ်ဘူးဂျ ကျနော်လဲ နေတိုင်းမဟုတ်တောင်လာဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်ဗျ ဖြေနိုင်သူဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားပေးမယ်
8 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 4th April 2011, 4:16 pm
ကျွန်တော်အထင်တော့commercial softwareတွေကိုတင်လို့မရတော့ သတင်းအပိုင်းတွေကိုပိုဦးစား သတင်းတွေကိုတစ်နေ့တစ်ပုဒ် နှစ်ပုဒ်လောက်တော့ထည့်ရေးသင့်တယ်။
9 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 4th April 2011, 4:31 pm
tuntin wrote: ကျွန်တော်အထင်တော့commercial softwareတွေကိုတင်လို့မရတော့ သတင်းအပိုင်းတွေကိုပိုဦးစား သတင်းတွေကိုတစ်နေ့တစ်ပုဒ် နှစ်ပုဒ်လောက်တော့ထည့်ရေးသင့်တယ်။
ခုလိုအကြံပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခြား member တွေလဲ feedback လေးတွေပေးကြပါဦး။
10 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 5th April 2011, 12:21 am
ဖတ်သူအတွက် အကျိုးရှိမယ့်ဟာလို့ထင်တာမှန်သမျှရေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
မရေးခြင်းထက် ရေးခြင်းက ပိုပြီ သက်ဝင် ပါလိမ့်မယ်
အားမနာတန်းပြောရရင် ကို fox က မြင်းကမလှုပ် ခုံကလှုပ် ဆိုသလိုဖြစ်နေပါတယ်
(ချိတ်ဆိုးနဲ့ နော် )
မေးခွန်းကိုမဖြေရင် ဖြေနိုင်တဲ့ လူမရှိလို့ဟုမှတ်ပါ
ပိုစ့် အသစ်မတက်ရင် တင်နိုင်တဲ့ လူမရှိလို့ဟုမှတ်ပါ
software တွေတင်လို့ မရဘူးဆိုတာ ကိုတော့သိပ့်ဘ၀င်မကျပါ
တင်လို့ ရအောင်လုပ်ကြမလား ဒီအတိုင်းနေမလား?
ကျွန်တော့်ယူဆချက်ကတော့ စွန့် လွှတ်သင့်တာကို စွန့် လွှတ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
မင်မင်တို့ မော်မော်တို့သွေးအေးသွားကြတာလား?
11 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 5th April 2011, 9:40 pm
ကျနော်တော့ ဖိုရမ်ကို မ၀င်တာကြာလို့PW တောင်မေ့ချင်သလိုဖြစ်နေဘီ
အလုပ်လဲမအား..အပျင်းလဲ ကြီး..ဘာဆွေးနွေးလို့ ဆွေးနွေးရမှန်းလဲ မသိနဲ့ မိုလို့မလာဖြစ်ခဲ့သလို
ဖိုရမ်မှ အနားယူတော့မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတာကြောင့်လဲ မ၀င်ဖြစ်တော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်.။
ဖိုရမ်ကြီး ခုလိုခြောက်ကပ်နေတာမြင်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပါပဲ
နာပြန်အိပ်လိုက်ဦးမယ် hak hak hak
12 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 5th April 2011, 10:09 pm
အေးလေနော့ ခုလောလောဆယ် မင်မင်ကိုင်နေတဲ့ android အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်
13 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 5th April 2011, 10:25 pm
14 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 5th April 2011, 10:44 pm
Myanmar IT Resource ကြီး အနားယူပါတယ်တဲ့ဗျာ.. မနေ့ညက နှုတ်ထွက်စာတင်သွားတယ်ဗျ... ကျွန်တော် လက်ခံလိုက်ရမလား...
15 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 6th April 2011, 8:08 am
ဟား... ဆိုက်ကို ....
မင်းကတိပေးထားတယ်လေ။ MITR ကို ဘယ်တော့မှ မစွန့်ခွာဘူး။ ဘယ်သူမှမလုပ်ရင်တောင် ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းလုပ်မယ်ဆို။ အခုက မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့လဲရှိပါသေးတယ်။
စွန့်ခွာစရာမလိုပါဘူးဆိုက်ကို။ ငါတို့အားလုံး အတူတူပြန်ကြိုးစားကြတာပေ့ါ။ Myanmar Forum တွေမှာ Post အသစ်တွေနည်းတာက ငါတို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ MZ လိုဆိုက်မျိုးမှာတောင် Post အသစ်က အရင်ကလောက်မတက်ပါဘူး။ Admin ထပ်ခန့်မယ်။ Mod ထပ်ခန့်မယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အနားယူချင်တဲ့ သူများရှိရင် ဒီ Post လေးကနေ ကြေငြာနိုင်ပါတယ်။
16 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 6th April 2011, 8:51 am
လုပ်ကြပါဗျ ဒါတောင် Unicode မပြောင်းသေးဘူးနော် ပြောင်းများပြောင်းရင်ဘယ်လိုနေမယ်မသိပါ။
ကိုယ်လုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်သလောက် တိုးတက်နိုင်ပါတယ် ခုလည်း ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီဆိုဒ်က အရေးပါတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါဘဲဗျာ။ ဘာတွေ စိတ်ဓာတ်ကျနေတာတုန်း။ Post မတင်ဖြစ်တဲ့ လူတွေကလည်း မအားလို့ဆိုတာ သိပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်း ရာတုးကြီးကြီးယူထားရင် တာဝန်လည်းပိုကြီးပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးအတွက် အချိန်နည်းနည်းဖဲ့ပေးကြပေါ့။ မှားတာရှိရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။
17 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 6th April 2011, 9:43 am
ကျနော်အနားယူမယ်ဆိုတော့ Mod အဖြစ်ကနေပြောတာပါဂျာ..
တာဝန်ယူပြီး တာဝန်မကျေတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရှက်ပါတယ်..ဒါကြောင့်ပါ.
တစ်တက်လုံးမလာတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး..
ငါမလာလို့ လဲ ဒီဖိုရမ်ကြီး ဘာမှဖြစ်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသာကြီးပါ...
လာလဲဘာမှ ဟုတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး..
User ဘ၀နဲ့ ပဲ အဆင်ပြေတဲ့အချိန်၊အားတဲ့အချိန်လေးတွေ ၀င်ဆွေးနွေး၊၀င်လေ့လာသင်ယူပါတော့မယ်လို့ 
ဖိုရမ်ကြီးစိုပြေအသက်ဝင်နေဖို့ အတွက် အားလုံး ၀င်ဆွေးနွေးပေးကြမှ ရမယ်လေ ဟုတ်ဘူးလား..
ခုက ၀င်ဖတ်.ပြန်သွားတွေများလို့ခြောက်ကပ်နေတာပါ
ခုလို ပို့ စ်မျိုးမှာတောင် ဘယ်လောက်များများက ၀င်ပြောကြလို့ လဲဆိုတာ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ..
နောက်တစ်ခုက Downloading Zone ထားမရတော့တာပါပဲ.အဲတာလဲ ပါပါတယ်
တခြား Member တွလဲ.
အဲလိုငြိမ်မနေပဲ အကြံအဥာဏ်လေးတွေပေး...ဘာလေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်၊ဘာတွေနားမလည်ဘူး၊ဘယ်လိုဟာ မကောင်းဘူးစသဖြင့် ပေါ့ဗျာ
ကြိုးစားကြပါ၊နိုးထကြပါ၊ပျောက်ပျောက်မသွားပါနဲ့ ၊လွယ်လွယ် ကတိ မပေးကြပါနဲ့ ၊ငြိမ်မနေကြပါနဲ့ဝင်ဆွေးနွေးကြပါ၊အကူအညီတွေပေးပြီး အကူအညီတွေတောင်းခံကြပါ
18 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 6th April 2011, 10:34 am
ဒီလိုလုပ်ပါလား တစ်ရက်လောက် Member တွေစုပြီး ဘောလုံးကန်တာတို့ ဆွေးနွေးတာတို့ လုပ်ကြပါလား?
ဒါမှလည်း ခင်မင်ရင်းနှီးလာမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း FACEBOOK လိုမသုံးရမနေနိုင်အောင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
19 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 6th April 2011, 10:41 am
adm ဆိုတစ်လ ပို့ စ် ဘယ်လောက်
mod ဆို ဘယ်လောက်
download zone ကိုတော့မရရအောင် လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
( စိတ်မဆိုးကျနဲ့ ဗျာ ခုဟာကရေစုန်မြောသလိုကြီးဖြစ်နေတယ်
ဖောက်ထွက်ဖို့ နည်းလမ်းများ ရှာကြပါဦး )
20 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 6th April 2011, 12:34 pm
ဆက်မော် wrote: ဒီလိုလုပ်ပါလား တစ်ရက်လောက် Member တွေစုပြီး ဘောလုံးကန်တာတို့ ဆွေးနွေးတာတို့ လုပ်ကြပါလား?
ဟုတ်ကဲ့..အဲ့လိုဆိုရင် ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာဆိုရင် အဆင်ပြေမလဲဆိုတာ ညှိကြတာပေါ့။
ကျန်တဲ့ admin, mods တွေလဲ ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး။
21 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 6th April 2011, 2:12 pm
22 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 6th April 2011, 2:13 pm
Admin တွေ Moderator တွေ ခုထိမနိုးကြသေးဘူးလားဗျ။ကို solar ko ko ရေ ထပါတော့ဗျာ
23 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 6th April 2011, 9:09 pm
အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါ ဒီ Topic မှာဝင်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေကိုပါ ဖိတ်သင့်တယ်..
မြင်းက မလှုပ်ပဲ ခုံကလှုပ်ပေးနေကြပေမဲ့..ဖိုရမ်ကောင်းကျိုးလိုလားကြတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ ပါ..
ပြီးတော့.. Mod အသစ်များလဲ ထပ်ဖြည့်ပြီ အနားယူချင်သူများကို အနားပေးမယ်လို့ လဲ သိရပါတယ်ဗျာ..
24 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 7th April 2011, 8:38 am
Sunday Morning9am to 11 am , ဘီယာဆိုင်ကောင်းကောင်း အဲလေ နေရာကောင်းကောင်းေ၇ွးကြပါလား? အချိန်ပြောပြီနော် နေရာလေးကို အကြံ့ပူပေးကြပါလား?
25 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 7th April 2011, 9:31 am
ဒီတစ်ပတ်တော့အဆင်မပြေလို့ပါဗျာ။ ကျွန်တော် မိသားစုကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ပါ။ သင်္ကြန်အပြီးလောက် ချိန်းရင်ကောင်းမယ်ဗျ။ ဘယ်လိုသဘောရကြလဲ
26 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 7th April 2011, 9:40 am
ပြီးမှ ပျောက်ပျောက်မသွားဖို့ ပဲလိုပါတယ်..
27 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 7th April 2011, 12:07 pm
$ƴǩǾ တို့ကရော စာမေးပွဲနီးလို့မ၀င်ဖြစ်တာလား မသိ......ကျန်တဲ့ လူကြီးပိုင်းကရော ဒီလိုကိစ္စလေးတွေကို ဘယ်လိုသဘောရလဲ
28 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 1:57 am
ဟဲဟဲ.. ကျွန်တော် ဒီအချိန်ကို စောင့်နေတာပါ...
မြင်းက မလှုပ်ပဲ ခုံကလှုပ်တယ်လို့ အပေါ်မှာပြောထားတာလေး တွေ့ပါတယ်...
လူတိုင်း အဲဒီ့လို ထင်နေသေးလို့ ကျွန်တော် တကယ် မလာသေးတာပါ...
ဒီဖို၇မ်ရဲ့ တာဝန်ရှိသူများကသာလျှင် ဒီဖိုရမ် အရေးဆွေးနွေးရမယ်၊ Member ဆိုတာက ဒီအတိုင်း ၀င်ဖတ်၊ ၀င်မှတ်၊ စိတ်ပါရင် reply ပြန်၊ မပါရင် မပြန်၊ ဆိုပြီး ယူဆနေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်..
အခုလည်း ကျွန်တော်က တစ်လုံးမှ ၀င်မပြော၊ ပြောရင်လည်း ပေ့ါပေါ့လေးပြောနေတော့၊ မြင်းကမလှုပ် ခုံကလှုပ်တို့၊ အိုးကမပူ စလောင်းကပူတို့ ဖြစ်လာတာပေါ့။
တကယ်က ဒီဖိုရမ်က Member အင်အားနဲ့ လည်ပတ်နေတာပါ။ Admin၊ Moderator ဆိုတဲ့ လူတွေနဲ့ လည်ပတ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခု ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဖြစ်နေတာက Forum အရေး ဘယ်သူတွေးမလဲ။ Admin တွေး။
Forum အထိန်း ဘယ်သူထိန်းမလဲ။ Moderator ထိန်း။ ဆိုတာတွေဖြစ်နေပါတယ်။
Member ထဲက Forum အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးတစ်ယူနဲ့ ၀င်ဆွေးနွေးတဲ့သူ လက် ၁၀ ချောင်းမပြည့်ပါဘူး။ အခု ဒီ Post မှာလည်း မပြည့်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အားရစေလောက်အောင်တော့ ဖြစ်သွားပါတယ်။
အရင်က ကျွန်တော်၊ ဘာကြီးလုပ်မယ်၊ ညာကြီးလုပ်မယ် ပြောဖူးပါတယ်... အခုအချိန်မှာ တကယ်မလုပ်ရသေးတဲ့ အတွက် ပြောနိုင်တာကတော့ ကတိအလွယ်ပေးတယ်လို့ ပြောလို့လည်းရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ ကတိအလွယ်ပေးတာဆိုတာ ဖြစ်သွားတဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းတစ်ချက်တော့ရှိပါသေးတယ်... (အကြောင်းပြချက်ပေးတယ်ဆိုတာထက်၊ သိစေချင်လို့ ပြောတာပါ) အဲဒါကတော့...
ကျွန်တော် အားတက်သရော၊ Theme ချိန်းတယ်... feedback က တက်မလာ.... ပြောင်းသင့်တာလေးတွေ ပြောင်းကြည့်တယ်.. ပိုစ့်တွေက တက်မလာ... ဒီကြားထဲ ဒီလပိုင်းတွေအတွင်း ဖိုိရမ်ကခြောက်ကပ်ကပ် ၀င်တဲ့သူရှိပေမယ့် ဘယ်သူမှ ဘာမှမရေး...
အချိန်တွေ ပေးဆပ်ပြီး ဆက်လုပ်ရမယ့်သူက၊ ဘယ်က အားအင်တွေ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေနဲ့ ဆက်ပြီးပြင်ပေးရမယ် မသိ။ အဲဒီ့တော့ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်တက်လမ်းအတွက် စာတွေဘဲ လှိမ့်ဖတ်နေတော့တယ်.. စာလည်း မရေးတော့ဘူး. ရေးဖို့လည်း ပျင်းသွားတယ်... (အခုချိန်မှာ ကျူတိုရီရယ် ရေးချင်စိတ်သာရှိရင်၊ စာရေးချင်စိတ်သာရှိရင် ဖိုရမ်စလုပ်စကနေ၊ ကျွန်တော်မပျောက်သွားခင် အချိန်ထိ ကျွန်တော် မျှဝေခဲ့သမျှ ပညာတွေထက် အများကြီးအကျိုးရှိမှာတွေ စနစ်တကျ မျှဝေပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ရောက်လာပြီလို့ ပြောလို့ရပြီ။ ကိုယ်တိုင်လည်း အတော်ရင့်ကျက်လာပြီ။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက Motivation ဘဲ။ ကျွန်တော့်ကို ရေးချင်စိတ် ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးမယ့်အရာ မရှိဘူး။ ရေးမယ်လို့ ကြံလိုက်ပြီး အားကြိုးမာန်တက် ဖိုရမ်ကိုလာကြည့်တယ်၊ စိတ်ဓါတ် သုညနဲ့ ပြန်ဆင်းသွားရတယ်..)
ဒီ Topic လှုပ်လှုပ်(လှုပ်လှုပ်) ဖြစ်နေတာကို စောင့်ကြည့်နေတာ၊ ပုံမှန် လှုပ်တာလား၊ ကောက်ရိုးမီးလား ကြည့်ကြည့်နေရင်း မနေ့ကထိတော့ ပုံမှန်လှုပ်နေတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ကျွန်တော် အခု ပိုစ့်ကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတမိန့်ခွန်းတစ်ချို့ သတင်းစာမှာဖတ်လိုက်ရတယ်၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့၊ ကိုယ့်အဆင့်အတန်းမြင့်မားဖို့၊ အစိုးရကိုချည်း အားကိုးနေလို့မရပါဘူးတဲ့၊ ကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်မှ တိုးတက်မှာပါတဲ့။ ဟိုးအရင် ဒီနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ မဖြစ်ခင်တည်းက ကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့ အယူအဆနဲ့ ကွက်တိ။ အခုလည်း ဒီအတိုင်းပါဘဲ။ အရမ်းကို တစ်သီးတစ်သန့်ဆန်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Member တွေကို၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဖိုရမ်အရေး စိတ်ဝင်စားလာမှ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာမှာပါ....
အဲဒီ့တော့ နည်းနည်းလေး ထပ်စဉ်းစားလိုက်ကြပါဦး...
29 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 2:16 am
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်တော့ ဒီ သက်ဆိုးဘယ်လောက်ရှည်မလဲဆိုတာ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုမြေခွေး တိုင်ပင်ပြီး တင်လိုက်တာပါ။
နိုင်ငံခြားဖိုရမ်တစ်ခုမှာ အဲဒီ့လို Post မျိုးကို Member ကိုယ်တိုင်ကဘဲတင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျန်တဲ့ Member တွေက ၀ိုင်းဝန်းပြီး ဆွေးနွေးပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ အဲဒီ့ Topic မှာ Admin တွေ Moderator တွေရဲ့ ဆွေးနွေးမှု ၁ ခု ၂ ခုသာပါဝင်နေတာပါဘဲ။
အဲဒီ့လိုလေးတွေ့တော့ ကျွန်တော်လည်း၊ ကျွန်တော့် Member တွေ၊ ဒီ Forum နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ serious ဖြစ်သလဲဆိုတာ သိချင်တဲ့အတွက် ဒီ Topic ကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဘဲ ဒီပိုစ့်သက်တမ်း ၁ လခွဲလောက်ရှိမှ တကယ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ တင်တင်ချင်းတုန်းကဆို ပြန်လည်ဆွေးနွေးသူမပြောနဲ့ ဖတ်သူတောင် ရှိရဲ့လား မတွေးရဲပါဘူး။
ကျွန်တော့်ဘ၀က Member တစ်ယောက်ရဲ့ Feedback ကို ဖတ်ချင်လို့ Member Account အသစ်တွေလုပ်ပြီး၊ Admin တွေဆီပေးတဲ့ Feedback တွေကို တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရေးခဲ့တာတွေတောင်ရှိပါတယ်။
ဆက်ပြောရင် ဒီဖိုရမ်မှာ Active ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Member ပေါင်းများစွာမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်ခွဲခဲ့ရတဲ့ Account ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုတော့ အဲဒီ့ Account တွေကိုလည်း စိတ်ကုန်သွားပါပြီ။
ဆက်လက်ပြီး မြင်းကမလှုပ်၊ ခုံကလှုပ်။ အိုးကမပူ စလောင်းကပူကြပါဦး...
အစ်ကိုတို့အားလုံးရဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်...
30 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 2:21 am
အိုဘားမား ပြောတဲ့ Change We Need! ဆိုတာကို ကျွန်တော့်ရဲ့ signature မှာ အားနေလို့၊ နေရာလွတ်နေလို့ အလှတင်ထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး...
ကျွန်တော်လည်း သူ့လိုဘဲ နောက်ထပ်တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Yes, We Can. ဆိုတာလေး ဆက်ပြီးပြောချင်ပါသေးတယ်...
(စာကြွင်း။ ။ အဲဒီ့ Phrase က အိုဘားမား အရင်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဆယ်သန်းဆိုတဲ့ မြန်မာ သတင်းစာဆရာက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကတည်းက အရင်ပြောထားတာပါလို့ ကိုမြေခွေးမှ ဖြည့်စွက်ပါတယ်။)
31 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 10:28 am
ဇာတ်လိုက်လာလိုက်တာ ကြည့်လို့တော့ပိုကောင်းသွားပါပြီ အားပေးမဲ့လူများ မများဘဲကြည့်ရတော့မယ် ထင်ပါ့
ဇာတ်ရှိန်လေးတက်လာပြီဆိုတော့ ကဲ Member များလည်း ၀င်ဆွေးနွေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်ဗျာ။
32 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 11:19 am
သင်္ကြန်အပြီး တနင်္ဂနွေနေ တစ်နေ့လောက်အားလုံး Tokyo Donuts မှာတွေ့ကြရအောင်ပါ။ ဒီပို့စ်လေးမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးထားသူများအားလုံး တက်ရောက်စေချင်ပါတယ်။ မဖြစ်မနေတက်ရောက်ရမည့်သူများကတော့
$ƴǩǾ, alt.332, z3r0c00l, dr.burma, ko shinn thant, samurai, ထက်နိုင်, ဆက်မော်, fox, nGr69, စသောသူများ တက်ရောက်စေချင်ပါတယ်။ Member တွေထဲကတော့ rat, TWO TWO, ငစလူ စသောသူများလဲ တက်ရောက်စေချင်ပါတယ်။ တက်ရောက်နိုင်သည်၊ မတက်ရောက်နိုင်သည် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးကြပါ။ အဲဒီမှာ MITR Reborn ပြန်လုပ်ပါမယ်။ အားလုံးတာဝန်တွေကို စနစ်တကျခွဲဝေယူကြပြီးတော့ MITR ကြီးတိုးတက်လာအောင် ပြန်လည်ကြိုးစားကြပါစို့။ အဓိကပြောချင်တာကတော့ လက်ရှိ Admin တွေနဲ့ Mod တွေ နှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေ မကြားပါရစေနဲ့။ အားလုံးအတူတူကြိုးစားခဲ့ကြတာ အားလုံးပဲ အတူတူရှေ့ဆက်ပြီးသွားချင်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလဲ အကြမ်းဖျဉ်းလေး ဒီလိုစီစဉ်ထားပါတယ်။
1. MITR New Formation (MITR အသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း)
2. Responsibility Distribution (တာဝန်ခွဲဝေခြင်း)
3. Appoint New Moderator & New Admin (Mod အသစ် နှင့် Admin အသစ်များထပ်မံခန့်အပ်ခြင်း)
4. Refreshment Program (အကျွေးအမွေးအစီအစဉ်) (မိမိဖာသာတာဝန်ယူရန်)
33 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 12:04 pm
ကျန်တာတော့ သဘောတူပါသည်။ လာခဲ့ပါ့မည်။ အချိန်က မနက် ၉နာ၇ီမှ ၁၀နာရီ အရောက်လာခဲ့ကြပါ။
34 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 12:24 pm
အားလုံးအင်္ကျီအဖြူဝတ်ထားရင် တူညီဝတ်စုံနဲ့ ယောက်ျားလေးအရွယ်ကောင်း ၁၀ ယောက်ကျော်လောက်စုထိုင်နေမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ဆွဲစိသွားမှာပေါ့။
35 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 12:27 pm
အင်း ဒါတော့ကြောက်တတ်သားဗျာ။ ကြိူက်တာ ၀တ်ပါ အချိန်ပြောပြီးပြီနော် သိပ်မဆွဲနဲ့တော့ မြန်မြန်လေး ပြန်လုပ် မဟုတ်ရင် သွေးအေးသွားမယ်ဗျ။
36 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 12:33 pm
နေ့ရက်ကို 24.Apr လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေကြမလားခင်ဗျာ။
Tokyo Donuts လို့သတ်မှတ်လိုက်တာကတော့ အားလုံးအတွက် ငွေကြေးကိစ္စအဆင်ပြေကြစေချင်လို့ပါ။ အကယ်၍သာ ဒီကိစ္စကို Beer ဆိုင်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ပိုက်ပိုက်က တော်တော်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် American System ဖြစ်တဲ့ Tokyo Donuts ကိုဆွေးနွေးလိုက်ခြင်းပါ။ အချိန်ကတော့ ညနေ ၄ နာရီလောက်ဆိုအဆင်ပြေမလားမသိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုထက်နိုင်က ၁၂ နာရီနောက်ပိုင်းမှအားမယ်ဆိုလို့ပါ။ ဒီလိုအချိန်ပြင်လိုက်လို့ ကျွန်တော်က ကိုထက်နိုင်တစ်ယောက်တည်းကိုစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့သူများလဲ သင်တန်းတွေဘာတွေတက်တဲ့သူများရှိကြရင် အဲဒီအချိန်အားလောက်ပြီလို့ယူဆလို့ပါ။ ယခုအစီအစဉ်များ မိမိနဲ့အဆင်မပြေပါက လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးငြင်းခုံနိုင်ပါတယ်။
37 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 12:45 pm
ဟိုက် အနော်က ၅ နာရီမှစမှာဗျ။ ရပါတယ် အစုအပေါင်းလုပ်နေတော့ တစ်ရက်တော့ ဖျက်ရမှာပေါ့ အားနေတဲ့နေ့က များနေတယ်ဆိုတော့ အွန်း ချိန်းပြီးမလာရင်တော့ ဘီယာလိုက်တိုက်ခိုင်းမယ်။
38 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 12:51 pm
ကျွန်တော် Mail က [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ။ အားလုံးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဘီယာလည်းတိုက်နိုင်ပါသည်။
39 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 1:04 pm
အက်ထားပါတယ်။ Accept လဲလုပ်ဖူး။ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ကျွန်တော်က [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ။
40 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 1:13 pm
ဒီတစ်ခါလည်း ဘီယာမသောက်ရတော့ပြန်ဘူး ;(
41 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 1:33 pm
nGr69 နဲ့ ဒီtopic ကို စရေးတဲ့လူများက အားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးဖြစ်အောင် သူတို့ ဘီယာဒကာခံမယ်လို့ သတင်းကြားနေရပါတယ်ခင်ဗျ။ ထောက်ခံတဲ့လူများရှိကြပါသလား။
42 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 1:44 pm
43 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 4:13 pm
နယ်က မန်ဘာတွေကိုလည်း တစ်ချက်တော့ထည့်စဉ်းစားပေးကြဦးလေ.... အဲ့အချိန်တက်တော့တက်ချင်တယ်
ပြီးရင် ပဲခူးကိုပြန်ရမှာ ဆိုတော့ .....ရပါတယ်။ နှစ်ဆန်း2 ရက်နေ့လောက်ကစပြီး စာရင်းကောက်တာတို့ ဘာတို့ သေချာချိန်းကြပါလား.... ရက်အတိအကျနဲ့ နေရာအတိအကျကို သိရင် မန်ဘာအားလုံးကို မေးလ်
ပို့ပေးပေါ့... ဖျက်မယ်ဆိုရင်တောင် သေချာအဲ့လိုလေး ဆုံပြိးမှ ဖျက်လိုက်ကြတာကပိုကောင်းတယ် ဖျက်ဖို့ကိုတော့ ဒီပို့စ်မဖတ်ခင် လုံးဝစိတ်ကုးထဲတောင်မရောက်ပါဘူး.... ခုလဲအဲ့လိုတော့လုံးဝကို မဖြစ်စေ့ချင်ပါ
ဘူး.... log in တောင်မဝင်ဖြစ်တော့တာ ကလည်း လိုင်းနဲ့လုံးဝကို ဆိုင်တယ်ဗျ...တတ်နိုင်သလောက်လေး တောင့်ခံကြပါဦးဗျာ....
44 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 4:32 pm
MITR ကို ဖျက်ပစ်လိုက်ဖို့ကို စိတ်ကူးထဲမှာလုံးဝကိုမရှိတာပါ။ နယ်က အစ်ကိုတို့ပါ လာချင်တယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အချိန်ကို ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးပါ့မယ်။
45 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 8th April 2011, 11:33 pm
ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေတဲ့အချိန် ချိန်းကြပါ
ပြီးခဲတဲ့barcamp ygn မှာ ချိန်းတဲ့နေရာမှာစောင့်နေတာ
ကျွန်တော်နဲ့ကို rat ပါ
download zone ကြီးအတွက် ဘာမှပြန်မပြောကြပေမယ့်
46 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 9th April 2011, 10:38 am
ဟုတ်တယ် ချိန်းပြီးမလာရင် တော်တော်စိတ်ဆိုးရမှာဘဲ။ ဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကလည်း Barcamp မှာ စောင့်နေတဲ့ လူတွေရှိပြီး လာလည်းမလာကြဘူး။ ဂတိပေးပြီးရင်တော့ ဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါဗျာ။
47 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 9th April 2011, 12:07 pm
စိတ်ချပါ။ ကျွန်တော် $ƴǩǾ & alt.332 ကိုလဲ ဖုန်းဆက်ထားပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကိုတော့ သေသေချာချာကိုလာကြမှာပါ။
48 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 9th April 2011, 7:22 pm
ဒါဆို April 24 အချိန်ကိုတော့ ၉ နာရီကနေ3နာရီအတွင်းညှိကြတာပေါ့။ နယ်ကလာမယ့် member များလဲ အဆင်ပြေအောင်လို့ ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ BarCamp Yangon 2011 အင်္ကျီဝတ်လာပါ့မယ်။ Laptop မှာလဲ BarCamp 2010, BarCamp 2011 Sticker တွေကပ်ထားပြီး Myanmar IT Resource ဆိုတဲ့ စာတန်းကိုလဲ ကပ်ထားပါတယ်။ တခြား member တွေလဲအဲ့လို ထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသားလေးတွေပြောထားကြပါလား..
gmail က htetnaing90 ပါ။
ဖုန်းနံပါတ်က 09-5107137 ပါ။
49 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 9th April 2011, 7:57 pm
သိသလောက်တော့ mod/admin တွေ ချိန်းတဲ့ပွဲဆို မလာတဲ့လူမရှိသလောက်ပါပဲ
အဲ member ပိုင်းက တော့ မတက်ဖြစ်တာတွေတော်တော်များပါတယ်
50 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ on 9th April 2011, 8:47 pm
Oops! BCY2011 တုန်းက ကျွန်တော်လာတယ်လေဗျာ...
အရေးကြီးကိစ္စ၊ မဖျက်ရင်မရတဲ့ကိစ္စကလွဲရင်၊ ချိန်းပြီး မလာတာရှိဘူးပါဘူးဂျာ..
ပြီးတော့ Member တွေ အပါအ၀င်ချိန်းဖူးတာ BCY2011 တစ်ခုဘဲရှိပါသေးတယ်... အဲတုန်းက ထိပ်မှာကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်သူမှမရှိတာနဲ့ ၀င်လာပြီး အထဲရောက်မှ ပြန်တွေ့တာလေ..
51 Re: သက်ဆိုးဘယ်လောက် ရှည်မလဲ